ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နောက်ကွယ်က နာကျင်စရာများနဲ့ Beyonce ရဲ့ “Pretty Hurts” – DigitalTimes.com.mm
Beyonce ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးကြိုက်ကြတာ အကြောင်းမဲ့သက်သက်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေ။ အသေသတ်နိုင်လောက်တဲ့ အသံပါဝါကြီးနဲ့ အမိုက်စားကကွက်တွေ အလန်းစားဘော်ဒီကြီးတွေနဲ့ Beyonce ရဲ့ “Pretty Hurts” သီချင်းကတော့ ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကို အထူးပြုဖော်ပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
“တစ်ချို့သောအရာတွေကို ကျွန်မတို့ပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုတော့ ကျွန်မတို့မပြုပြင်နိုင်ဘူး”။ Chorus အနေနဲ့ “It’s the soul that needs the surgery” ဆိုတဲ့စာသားလေးက ဒီသီချင်းကိုလုံးဝပုံဖော်နိုင်တဲ့စာသားလေးပါပဲ။ ဒီသီချင်းဗီဒီယိုထဲမှာတော့ သူမအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြဿနာအမျိုးမျိုးကြုံရတာတွေ၊ ဆေးတွေသောက်ရတာတွေ၊ Botox တွေထိုးရတာတွေနဲ့ တခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေနဲ့ အချေအတင်ဖြစ်ကြတာတွေ ဒါတွေကိုပုံဖော်ထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲက Character က သူမနဲ့တစ်ထပ်တည်းကျသလို အထူးသဖြင့်ကတော့ ဗိုက်တွေပေါင်တွေကျအောင်လုပ်ရတာ ဝိတ်ပုံမှန်ချိန်ပြီးလျှော့နေရတာတွေကတော့ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအထင်းသားပါပဲ။
ဒီသီချင်းမှာ Beyonce ရဲ့ Character ကတော့ ဆိုးဝါးလွန်းမနှစ်မြို့တဲ့အရာတွေကိုသည်းခံနေရပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာသူမနားလည်လိုက်တာက သူမအလိုချင်ဆုံးအရာကတော့ ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ ဆိုတာပါပဲ။
ဒီသီချင်းလေးရဲ့ပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကတော့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖိအားတွေနဲ့လှအောင်ကြိုးစားနေပေမယ့် ပျော်ရွှင်မှုအစစ်ကိုမရခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဖိအားတွေသေလောက်အောင်များနေလည်း ကျေနပ်တယ်ပျော်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါပျော်ရွှင်မှုအစစ်လို့ပဲပြောရမှာပါပဲ။ သူမကတော့ မျက်နှာတွေ ခန္ဓာကိုယ်တွေပြင်တာထက် စိတ်ကိုပြုပြင်ဖို့ပိုလိုနေပြီဆိုတာကို ဖော်ကျူးခဲ့ချင်ပုံပါပဲ။
“သင်ကိုယ်တိုင်ရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်အားရပီတီဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုရနေပြီလား??”
အောက်မှာ ဗီဒီယိုလေးကို တစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပါဦး…
Beyonce ကိုတဈကမ်ဘာလုံးနီးပါးကွိုကျကွတာ အကွောငျးမဲ့သကျသကျတော့မဟုတျပါဘူးလေ။ အသသေတျနိုငျလောကျတဲ့ အသံပါဝါကွီးနဲ့ အမိုကျစားကကှကျတှေ အလနျးစားဘျောဒီကွီးတှနေဲ့ Beyonce ရဲ့ “Pretty Hurts” သီခငျြးကတော့ ဒီလူ့အဖှဲ့အစညျးထဲမှာ ခန်ဓာကိုယျပုံပနျးသဏ်ဍာနျနဲ့ ပတျသတျပွီး တှရေ့တဲ့ပွဿနာလေးတှကေို အထူးပွုဖျောပွခငျြတာပဲဖွဈပါတယျ။
“တဈခြို့သောအရာတှကေို ကြှနျမတို့ပွုပွငျဖို့ကွိုးစားကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ မမွငျရတဲ့အရာတှကေိုတော့ ကြှနျမတို့မပွုပွငျနိုငျဘူး”။ Chorus အနနေဲ့ “It’s the soul that needs the surgery” ဆိုတဲ့စာသားလေးက ဒီသီခငျြးကိုလုံးဝပုံဖျောနိုငျတဲ့စာသားလေးပါပဲ။ ဒီသီခငျြးဗီဒီယိုထဲမှာတော့ သူမအနနေဲ့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ပတျသတျပွီး ပွဿနာအမြိုးမြိုးကွုံရတာတှေ၊ ဆေးတှသေောကျရတာတှေ၊ Botox တှထေိုးရတာတှနေဲ့ တခွားပွိုငျပှဲဝငျတှနေဲ့ အခအြေတငျဖွဈကွတာတှေ ဒါတှကေိုပုံဖျောထားပါတယျ။ ဗီဒီယိုထဲက Character က သူမနဲ့တဈထပျတညျးကသြလို အထူးသဖွငျ့ကတော့ ဗိုကျတှပေေါငျတှကေအြောငျလုပျရတာ ဝိတျပုံမှနျခြိနျပွီးလြှော့နရေတာတှကေတော့ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအထငျးသားပါပဲ။
ဒီသီခငျြးမှာ Beyonce ရဲ့ Character ကတော့ ဆိုးဝါးလှနျးမနှဈမွို့တဲ့အရာတှကေိုသညျးခံနရေပမေယျ့ နောကျဆုံးမှာသူမနားလညျလိုကျတာက သူမအလိုခငျြဆုံးအရာကတော့ ပြျောရှငျမှုပါပဲ ဆိုတာပါပဲ။
ဒီသီခငျြးလေးရဲ့ပေးခငျြတဲ့မကျဆခြေျ့ကတော့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ပတျသတျပွီး ဖိအားတှနေဲ့လှအောငျကွိုးစားနပေမေယျ့ ပြျောရှငျမှုအစဈကိုမရခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဖိအားတှသေလေောကျအောငျမြားနလေညျး ကနြေပျတယျပြျောတယျဆိုရငျတော့ ဒါပြျောရှငျမှုအစဈလို့ပဲပွောရမှာပါပဲ။ သူမကတော့ မကျြနှာတှေ ခန်ဓာကိုယျတှပွေငျတာထကျ စိတျကိုပွုပွငျဖို့ပိုလိုနပွေီဆိုတာကို ဖျောကြူးခဲ့ခငျြပုံပါပဲ။
“သငျကိုယျတိုငျရော ကိုယျ့ကိုယျကိုကနြေပျအားရပီတီဖွဈပွီး ပြျောရှငျမှုရနပွေီလား??”
အောကျမှာ ဗီဒီယိုလေးကို တဈခကျြရှိုးလိုကျပါဦး…
၂၀၁၈ ထုတ် iPhone များဟာ Android Phone များထက် အင်တာနက် အမြန်နှုန်း နှေးမည်